Bavule inhlangano yezintombi nto e-DUT | News24
Bavule inhlangano yezintombi nto e-DUT
ISITHOMBE: sithunyelweAmanye amalunga enhlangano iZimbali ze-DUT Virgin Society.
UKUKHULELA endaweni yasekhaya nokukhuliswa ngosiko lokuhlolwa ikona okukhuthaze uNks Wandile Khumalo(24) ukuba agcine esevule inhlangano yesintombi nto e-Durban University of Technology esigcemeni Indumiso eMbali Unit 1.
Le nhlangano eyethiwe ngokuthi Izimbali ze-DUT Virgin Society izokwethulwa ngokusemthethweni ngenyanga kaNtulikazi (July) khona eNdumiso Campus.
UNks Khumalo nowenza izifundo zobuhlengikazi kule nyuvesi uthe waqala ukuhlanganisa lenhlangano kusuka ngonyaka wezi-2017 ngesikhathi efika kule nyuvesi kodwa yaze yakwazi ukuthi inyuvesi iyiphasise ngenyanga kaNdasa (March) kulo nyaka. Ekhuluma ne-Echo uthe inhloso yale nhlangano ukuthi ihlanganise amantombazane ndawonye ezokwazi ukuthi akhulume nengezinkinga abhekene nazo zasenyuvesi.
“Leli kuzoba ithuba elihle lokuthi singamantombazane asezingeni elilodwa s ikwazi ukuxoxa ngezinto ezisithintayo. Kuzophinde kwenze izinto zibe lula uma ngabe kumele izinto ezifana nokuya eMkhosini woMhlanga ngoba ngeke kusaphoqeleka ukuthi sibuyele emakhaya ngaphambi kokuba sikwazi ukuthi sikwazi ukuya,”kubeka yena.
Uqhube wathi enye inhloso yale nhlangane ukuzama ukuqoqa intsha eseyizintombi nto ukuze izokhula ikwazi ukuziphatha.
“Akusikona ukuthi sifuna ukugqamisa ngoba siyizinntombi nto kodwa sifuna ukufundisana sikhulisane nathi sisodwa.
“Uma ngabe ususenyuvesi uthola kakhulu inkululeko yokuziphatha ngoba usuke ungasekho ekhaya eduze kwabazali nezihlobo abazokugada. Le nhlangano izosihlanganisa sonke sibe ngumndeni owodwa sigadane siholelane endleleni eqonndile.”
UNks Khumalo uphinde wakhuthaza labo abanye abayizintombi nto kodwa abasaba ukuphumela obala ukuthi bangasabi ukuzigqaja ngobuntombi babo ngoba kuyinto enhle futhi ewusiko olwaziwayo .
“Isifiso sethu ukuthi le nhlangano igcine isikhona nakwamanye amanyuvesi kuzona zonke izigceme ukuze nabo bezothola ithuba lokwenza ukufundisana loku esikwenzayo,” kuphetha yena.